Ungabheka Kanjani Uma i-iPhone / i-iPad yakho ikhiyiwe noma ivuliwe [Ivumile]
Ungahlola Kanjani Uma i-iPhone yakho / i-iPad ikhiyiwe noma ivuliwe
Kugcine ukubuyekezwa ngoSepthemba 8, 2020 nguJack Robertson
Ilokhi yenkampani yenethiwekhi yinto umhlinzeki wenethiwekhi azoyengeza ku-iPhone yakho abekhawulela ngayo i-iPhone yakho ekusebenziseni ukuxhumana kwenethiwekhi kwesinye isithwali.
Futhi, uma i-iPhone yakho ikhiyiwe, kukhona izindlela zokuyivula.
Ingxenye 1. Ungahlola kanjani ukuthi ngabe i-iPhone yakho ikhiyiwe noma ayikhiyiwe
Indlela 1 Khumbula ukuthi uyithenge kuphi futhi kanjani i-iPhone
Indlela 2 Shayela umphathi wenethiwekhi yakho
Indlela 3 Sebenzisa i-SIM khadi evela kolunye uthwali
Indlela 4 Hlola izilungiselelo
Ingxenye 2. Indlela ukuvula iPhone yakho
Indlela 1 Shayela inkampani yakho yenethiwekhi ucele ukuvula
Indlela 2 Vula idivayisi yakho ngamathuluzi wokuvula aku-inthanethi
Kulesi sigaba, kuzofakwa kuhlu lwezindlela ezimbalwa ongabheka ngazo ukuthi ingabe idivayisi yakho ikhiyiwe noma ayikhiyiwe.
Ngokuvamile, uma ufanisa esinye salezi zimo ezilandelayo, i-iPhone yakho ikhiyiwe.
I-iPhone yakho ithengwa kusuka kusithwali esithile ngesaphulelo futhi unayo usayine inkontileka.
Wena awukakhokhi i-iPhone ne isitolimende.
Futhi noma yiziphi kulezi zimo ezilandelayo ziphakamisa lokho i-iPhone yakho ivuliwe.
Unayo ikhokhwe ngokuphelele ngenkathi uthenga i-iPhone yakho
I-iPhone yakho ithengwe nge Isitolo se-Apple noma kuwebhusayithi esemthethweni ye-Apple.
Kepha, uma uthola i-iPhone komunye umuntu, ungahle ungazi ukuthi le iPhone ithengwe kanjani. Ungahlola izindlela ezilandelayo ukuthola ukuthi ngabe i-iPhone yakho ikhiyiwe noma cha.
Indlela ethembeke kunazo zonke yokuthola iqiniso ukuthi shayela umphathi wakho and ask them. After you have made a verification to prove that you are actually the customer of theirs, you’ll be told later.
Oxhumana nabo bezinkampani ezinkulu zokuphatha babhalwe kanje.
I-Verizon: 1 (800) 922-0204
I-Sprint: 1 (888) 211-4727
I-T-Mobile: 1 (877) 453-1304
Amanothi: KUFANELE unikeze iphasiwedi ye-akhawunti yakho yenkampani yenethiwekhi kanye nenombolo ye-IMEI ye-iPhone / iPad yakho. Futhi ngemuva kokwenza isicelo, uzokwaziswa ngomphumela ezinsukwini ezimbalwa.
Isinyathelo 1: Kumele amandla acishiwe i-iPhone / i-iPad yakho, edingekayo.
Isinyathelo 2: Vula ithileyi le-SIM khadi kanye ukususa iSIM khadi yoqobo.
Isinyathelo 3: Faka i-SIM khadi evela komunye othwala, bese uphonsa ithileyi emuva.
Isinyathelo 4: Ukuvula i-iPhone / i-iPad yakho bese uzama ucingo umndeni wakho noma abangane.
Uma ungenayo i-SIM khadi eyengeziwe yokwenza isivivinyo, ungabheka nokuthi i-iPhone / iPad yakho ikhiyiwe noma ayikhiyiwe ngedivayisi yakho ezandleni.
Khipha idivayisi yakho, bese uyashaya Amasethingi, thola Cellular or Idatha yeselula, tap it. If you can find Inketho yedatha yeselula or Inketho Yedatha Yeselula, your iPhone/iPad is unlocked. Or you cannot find such an option, it’s locked for sure.
The Inketho Yeselula / Yeselula kukhombisa ukuthi idivaysi yakho ingathola inethiwekhi kusuka kwezinye izithwali futhi lokhu kuxhumana kwenethiwekhi kungakhethwa ku-iPhone yakho.
Ngalezi zindlela, manje usungatshela uma i-iPhone yakho / i-iPad ikhiyiwe noma ivuliwe. Uma ivuliwe, siyakuhalalisela, ungashintshela kwenye inkampani yenethiwekhi.
Kepha, uma i-iPhone yakho ikhiyiwe, ungahle badinga izixazululo ukuvula i-iPhone yakho. Sicela uqhubeke nokufunda kwakho ukuthola izixazululo zokusetha i-iPhone yakho mahhala.
Ingxenye 2. Ukuvula i-iPhone yakho kusuka kusithwali esisodwa
Ukuvula i-iPhone yakho, ungamane ucele inkampani yakho yenethiwekhi ukuthi ikuvulele yona noma ungaphendukela kwamanye amasevisi aku-inthanethi.
Ungacela inkampani yenethiwekhi ukuthi ivule idivayisi yakho. Ungakwazi shayela enye yezinombolo zabathwali okukhulunywe ngenhla noma vakashela iwebhusayithi esemthethweni lesithwali. Uyatholakala ukwenza isidingo sokuvula i-iPhone yakho. Kepha ngaphambi kokwenza isicelo, sicela ubheke imininingwane elandelayo.
Inkampani yakho yenethiwekhi izokwenza kanjalo vula idivayisi yakho ngaphandle kwemali eyengeziwe kulezi zimo ezilandelayo.
Inkontileka oyisayinile nenkampani yenethiwekhi iphelelwe yisikhathi.
Inkampani yakho yenethiwekhi izokwenza kanjalo mhlawumbe ukhokhise ngokuvula noma ngisho wenqaba ukuvula kulezi zimo ezilandelayo.
Uma uthenge nge isaphulelo, futhi inkontileka isasebenza, kufanele unqamule isivumelwano sakho ngokukhokha isaphulelo noma ngisho nenhlawulo ephakeme.
Lapho inkontileka isasebenza, kunethuba lokuthi umphathi wakho azokwenza kanjalo ukuphika isicelo.
Uma uthenge nge- isitolimende futhi awukakhokhi, ungahle udinge ukukhokha inkokhiso yekhomishini okungaba ngamashumi amadola.
Ngakho-ke, nakhu konke odinga ukukwazi ngaphambi kokuthi uvule idivayisi yakho ngenkampani yakho yenethiwekhi.
Kukhona amathuluzi wokuvula ama-inthanethi amaningi wethu wokuqeda ukukhiya kwenkampani yenethiwekhi. Futhi nakhu esikutholile ukuthi sinalo.
#Sebenzisa i-Apple iPhone Unlock ukuvula i-iPhone yakho
I-Apple iPhone Unlock kuyinto yesikhulumi esiku-inthanethi esinikezela ngezinsiza zokuvula i-SIM kumadivayisi we-iOS. Ungavakashela iwebhusayithi bese u-oda ukuvula ukuvula idivayisi yakho.
Konke okudingayo ukunikeza imininingwane ethile mayelana nedivayisi yakho, kufaka phakathi i- Inombolo ye-IMEI futhi imodeli yedivayisi yakho.
Vele, ukuvulwa kusemthethweni futhi kuphephile, ungakhathazeki.
Lezi ulwazi mayelana nendlela ukutshela iPhone yakho ikhiyiwe noma cha futhi izindlela ukuvula eyodwa ikhiyiwe. Ngiyethemba, leli phepha lingakusiza ukuthi ukhombe umbuzo wakho futhi uwuxazulule.
Ungayivula kanjani i-iPhone ngaphandle kwe-SIM Card [100% Kusetshenzisiwe]
Vula i-iPhone ekhutshaziwe, Susa Iphasikhodi Yesikrini, Susa i-ID ye-Apple, futhi Susa Isikhathi Sesikrini.
Ungase Futhi Ufune Ukufunda
I-Bypass Activation Lock ku-iPhone
Vula i-iPhone Ebiwe Ngaphandle Kwephasiwedi